छ माया छपक्कै | Ratopati
कलाकार दीपक क्षेत्रीको स्मरण गर्दै लन्डनमा ‘छ माया छपक्कै’ access_timeपुस २१, २०७६
लन्डन । नेपाली चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ लण्डनमा प्रदर्शन गरिएको छ । चलचित्र हेरिसकेका दर्शकहरुले समय बितेको पत्तै नपाएको र माग्ने बुढो (केदार घिमिरे) को भूमिका आफूहरुले रुचाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दीपेन्द्र लामाद्वारा निर्देशित उक्त चलचि...
५१ औँ दिन पार गर्न सफल ‘छ माया छपक्कै’ access_timeमंसिर १५, २०७६
काठमाडौं । फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ले प्रदर्शनको दिन पार गरेको छ । पछिल्लो समय रिलिज भएका धेरै फिल्मले लगानी समेत सुरक्षित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ‘छ माया छपक्कै’ले भने प्रदर्शनको ५१औं दिनको यात्रा पार गर्न सफल भएको हो । दशैँको छेको पारेर गत ...
दुबै फिल्म हिट भएपछि दंग रोहित access_timeमंसिर ६, २०७६
काठमाडौं– यतिबेला निर्माता रोहित अधिकारी दंग छन् । उनले निर्माण गरेको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ प्रदर्शनको ५१ औं दिनको नजिक पुगेको छ । फिल्म यो बर्षको हालसम्मकै सर्वाधिक कमाउने फिल्म समेत बनेको छ । फिल्मले अहिलेसम्म १२ करोड माथिको व्यवसाय गरिसकेको रोहित...
‘छ माया छपक्कै’ चौथो सातामा, आम्दानी कति ? access_timeकात्तिक १८, २०७६
काठमाडौँ । दसैँको छेको पारेर गत असोज २४ गते रिलिज भएको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ प्रदर्शनको चौथो सातामा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । फिल्मले एकसाता पनि राम्रो व्यवसाय गर्न नसकिएको वर्तमान समयमा ‘छ माया छपक्कै’ ले भने प्रदर्शनको चौथो साता पार गर्न स...
‘छ माया छपक्कै’ हेर्न पुगे गगन थापा access_timeकात्तिक ७, २०७६
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ मन परेको बताएका छन् । बुबा, आमा, पत्नी र छोरीहरुसँग फिल्म हेरेका थापाले एक ट्वीट मार्फत फिल्म आफ्नो सबै पुस्तालाई मन परेको बताएका हुन् । ...
‘छ माया छपक्कै’को अहिलेसम्मको व्यवसाय कति ? access_timeकात्तिक ५, २०७६
काठमाडौं – दसैँको छेको पारेर गत असोज २४ गते रिलिज भएको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ले प्रदर्शनको दोस्रो साता पनि राम्रो ब्यवसाय गर्न सफल भएको छ । फिल्मले प्रदर्शनको पहिलो साता झै दोस्रो साता पनि राम्रो व्यवसाय गरिरहेको निर्माता रोहित अधिकारीको भनाइ छ ।&...
‘छ माया छपक्कै’ पोस्टरमा दीपक र केकीको प्रेम access_timeअसोज ९, २०७६
काडमाडौं – दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको टिमले बनाएको फिल्म हो ‘छ माया छपक्कै’ । फिल्म २४ असोजबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा निर्माण युनिटले फिल्मको प्रचारमा पनि तिव्रता ल्याएको छ । यसै क्रममा निर्माण युनिटले फिल्मको के...
‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलरमा राजनीति र प्रेम access_timeअसोज ३, २०७६
काठमाडौं – फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित ‘वान सिनेमाज्’मा आयोजित एक कार्यक्रममा ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । राजनीति पृष्ठभूमिमा प्रेम मिसाइएको ट्रेलरमा फिल्मका प्रायः सबै कलाकार अ...